Wholesale Samsung S21 Ultra 3D Kupisa-kukotama TPU Screen Mudziviriri Mugadziri uye Mutengesi | OTAO
TPU inonzi thermoplastic polyurethane, Iyi ipurasitiki ine chemakemikari ine zvivakwa zvinosanganisira kukwikwidza kuramba, kusimba, mafuta uye girisi kuramba, uye kuwedzera kusimba. Sezvo izvo zvinhu zvakasununguka, zvine mashoma "ekuzvirapa" kugona. Izvi zvinoreva kuti kupfava kwayo kudiki kunoipa simba rekutora isina kunyanya kukanganisika, senge madonhwe mazhinji uye kukwenya kureruka, uku ichichengetedza zvese kana zvakawanda zvezvakaumbwa zvepakutanga. Semuenzaniso, kukwenya kwakareruka kunowanzo siya kakapfava mupurasitiki yakapfava, iyo inodzokera zvishoma nezvishoma kune yakajairwa.
Iyo yekutanga TPU firimu yakaoma kwazvo kuisa, kunyangwe mushure mekudzidziswa kwehunyanzvi, unogona kusangana nematambudziko akadaro: Mabhonzo emhepo anonetsa kukwenya, uye guruva rinogona kupinda nyore nyore. Mushure mekuramba uchivandudza, iyo OTAO yakatsamwa firimu ikozvino inogona kutumirwa munguva ye novices kana panguva imwechete. Kugamuchirwa kuti utarise vhidhiyo yedu kuti uwane ruzivo.
OTAO's TPU firimu rakagadzirwa nezvinhu zvakaunzwa kubva kuSouth Korea, uye kuomarara kwayo kwepamusoro kwakakwirira kupfuura kweiyo firimu yakatsamwa, iyo inogona kudzivirira iyo skrini kuti isatswe, uye chero bedzi isina kukwenya zvakanyanya, inogona kuzvigadzirisa pachayo maawa mashoma.
Tora Samsung S21 Ultra semuenzaniso. Parizvino, mazhinji emafirimu akatsamwa pamusika anozove nerimwe kana akawanda eanotevera matambudziko. Kana iwe kana vatengi vako musingashiviriri matambudziko aya, TPU ichave sarudzo yakanakisa.
Kwete kushanda zvine hungwaru nekubata basa
Kugamuchirwa kweminwe hakunzwisisike (kunyanya Samsung S10, S20, S21, Cherechedzo 10, Cherekedza makumi maviri akateedzana shandisa ultrasonic zvigunwe zvemunwe kuvhura)
Zvizhinji zvegirazi rakadzikama rinoshandisa mabhureki esirik-akadhindwa pamativi ese ari maviri, ayo akafara kupfuura miganhu yefoni mbozhanhare, iyo inonyatso vharisa chikamu chewindo rekuratidzira.
Halo mhedzisiro mukati mekona
Zvakaoma kunamatira izere girazi rakatsamwa girazi parunhare pasina mabhuru
Zviri nyore kudonha
Zviri nyore kuwana guruva mushure mekushandisa chinguva
Samsung Cherechedzo 8
Samsung Cherechedzo 9
Samsung Cherechedzo 10
Samsung Cherechedzo 10+
Samsung Cherechedzo 20
Huawei Kudza 30 Pro / Nova7 Pro
Huawei Kudza 30
Huawei Kudza V40
OnePlus 9 Uyezve
OPPO Tsvaga X2
Mote Edge Uyezve
LG Mapapiro 5G
Pashure: iPhone 2.5D PMMA skrini inodzivirira Haina kumboputsika pamupendero
Zvadaro: Samsung S21 Ultra UV Glue Yakatsamwa Girazi
iPhone 2.5D zvedongo chinovhara mudziviriri kumbobvira brok ...
iPhone 12 akatevedzana 3D nebwe unopinza dzinopfavisa girazi S ...
iPhone 12 dzakateerana Schott dzinopfavisa girazi chidzitiro S ...
iPhone 12 dzakatevedzana 2.5D zvakavanzika dzinopfavisa girazi sc ...